IGulf Stream | Isimo Sezulu Senethiwekhi
La IGulf Stream wumsinga wolwandle osusa indawo enkulu yamanzi. Ibaluleke kakhulu kwabaseYurophu, ngoba ngenxa yayo singaba nesimo sezulu esifudumele esiqinisekisiwe sibheka nobubanzi besimo esikuso. Kepha futhi, kuya ngokuthi idlula kuphi, kuzoba nezimbali nezilwane ezihluke kancane, ezinama-arthropod amaningi ogwini olusentshonalanga yeNhlonhlo yase-Iberia kunasenyakatho yezwe, ngokwesibonelo.
Ngakho-ke, kungumsinga othakazelisa kakhulu ukwazi, ngakho-ke sizokwenza
1 Iyini iGulf?
2 Udlula kuphi iGulf Stream?
3 Ziziphi izici zayo?
4 Yini amaRings?
5 Kungani iGulf Stream ibaluleke kangaka eYurophu?
IGolfo Stella (Italy)
Ngaphambi kokungena esihlokweni, kubalulekile ukwazi ukuthi yini iGulf. Kulungile ingxenye enkulu yamanzi engena emhlabeni y lokho kuphakathi kwamakhanda. Zivame ukudideka namatheku, ngoba akwaziwa ngokuqinisekile ukuthi ukuphi umngcele walezi nendawo, kepha kuyaqondakala ukuthi amatheku amancane.
Kunoma ikuphi, kuyindawo ebaluleke kakhulu yezwe, ngoba kulapho kwakhiwa khona amachweba namachweba.
Udlula kuphi iGulf Stream?
Lokhu kungumsinga wolwandle oqala njengomphumela wokunyakaza okujikelezayo kweplanethi yoMhlaba, ukumiswa kwamachibi nomoya wasemhlabeni. Iqala uhambo lwayo eStraits of Florida, ibheke eYurophu, yize iphuzu eliqonde ngqo lapho ligcina khona belingakacaci, ngoba ukuqedwa kwalo kungaphezulu noma ngaphansi kububanzi 40ºN kanye no-50ºW, lapho amanzi alo afudumele nosawoti aqhubeka nendlela yawo enyakatho emsakazweni waseNyakatho ye-Atlantic, futhi INorway yamanje, naseningizimu ngeCanary Islands yamanje.
ENyakatho ye-Atlantic, amanzi ayo afinyelela eNorway naseGreenland, lapho ephola ngokushesha ngenxa yokusondela kwabo ePoleni. Ngokwenza njalo, baba denser ngenxa yokuqukethwe kukasawoti omningi, ngakho bayacwila ngenxa yamandla adonsela phansi. Ngakho-ke, sondeza ukusakazwa kwe-thermohaline okugeleza kujule.
Ziziphi izici zayo?
Ngobubanzi obumaphakathi obungu-80 kuya ku-150km nokujula phakathi kuka-800 no-1200m, amanzi ayo ahamba ngesivinini esiphezulu se- 2 amamitha ngomzuzwana njengoba isondela ezindaweni ezingezansi. Izinga lokushisa libuye liyehluka kakhulu emikhawulweni ngenxa yokuxhumana namanzi abandayo aseNyakatho namanzi afudumele aseNingizimu. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, kumngcele ohlukanisa iFlorida neBahamas neCuba, izinga lokushisa ebusweni lihle ngo-25ºC, ngenkathi eNorway, eBaltic Sea, icishe ibe ngu-9ºC.
Kusukela kwimvelaphi yayo kuya esifundeni samaGange Amakhulu, lesi yisikhathi samanje esine- umbala ohlaza okwesibhakabhaka ojulile nosawoti ophakeme, kepha ilahleka lapho ixubana nomsinga waseNyakatho ye-Atlantic. Vele, ukugeleza kwayo kuyahlaba umxhwele: eduze nase-Ireland kunjalo Izigidi eziyi-150 m3 / s, elenza libe ngolwandle oluthakazelisa kakhulu emhlabeni. Ukusinikeza umbono, ukugeleza okuthwalwa yiyo yonke imifula egelezela kuyo yonke imifula engena e-Atlantic kufinyelela ku-0.6 * 106 m3 / s.
Lapho sesifikile eYurophu, sihlukana sibe yimifudlana emincane enamazinga okugeleza aphakathi kwamamitha ayi-cubic ayishumi kuya kwayi-10 ngomzuzwana.
Isithombe - Isikhungo Sezindiza Sezindiza seNASA Goddard
Lesi yisikhathi samanje okuthi uma sesihlukanisiwe nemikhawulo yaseMelika siqale ukugeleza ngokujule kakhulu. Ngakho-ke, amanzi abandayo ahlukana namanzi oLwandle lwaseSargasso, futhi imvamisa enza ama-meanders angafika kuma-350km. Lapho zivala ngokwazo ziyabizwa Izindandatho, efinyelela kububanzi obuphakathi kuka-50 no-200km futhi ingahlala kusuka enyangeni kuye eminyakeni eminingana. Zihamba amakhilomitha ambalwa ngosuku, zibheke eNtshonalanga noma ngase-Equator.
Ziyizinto ezivame kakhulu emikhawulweni yamanzi anezinga lokushisa elihlukile. Bona usabalalise ukushisa nosawoti kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye. Futhi, kufanele kuthiwe kukhona izindandatho ezinamakholi amanzi abandayo, nezindandatho ezinamanzi ashisayo. Abangaphambili bahambela eningizimu futhi bajule (phakathi kwamamitha ayi-4000 kuya ku-5000), banesikhathi eside "sokuphila" nobubanzi obukhulu.
Kungani iGulf Stream ibaluleke kangaka eYurophu?
Ngaphandle kweGulf Stream, iYurophu ibingeke yehluke kangako neNorth Pole. Vele, bekungeke kubande njengalapho, kepha kungabonakala kakhulu kuma-thermometer. Kungani? Ngoba inani lamandla ashisayo athwalwa yilawa mandla alingana nobukhulu bawo, okungukuthi, uma amanzi eminyene ngokuphindwe kayinkulungwane kunomoya, ithwala ukushisa okuphindwe kayinkulungwane kunomthamo womoya ofanayo. Ngokubheka ukuthi le yamanje ithwala amanzi afudumele ukusuka emanzini ashisayo aseFlorida kuya eZwekazini Elidala, banendima ebaluleke kakhulu esimweni sezulu saseYurophu.
Futhi ukuthi njengoba isondela eYurophu, amanzi afudumele ahlangabezana nomoya obandayo. Lo mehluko emazingeni okushisa olwandle uqobo kanye nomoya yiwo onquma isimo sezulu sendawo esidlula kuyo, hhayi eYurophu kuphela, kodwa nasemhlabeni kusukela emoyeni obandayo oqhamuka eNtshonalanga yeNorway, lapho ugeleza kulo futhi kusiza ukuzinzisa izinga lokushisa kweplanethi.
Ngiyethemba ukuthi ufunde kabanzi ngeGulf Stream 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » IGulf Stream